Ahoana ny fanontana amin'ny iPad | Vaovao IPhone
Ny fanontana WiFi dia iray amin'ireo fampiharana teknolojia kely izay, na dia tsy tsapanao akory aza, dia mahatonga ny fiainanao ho milamina kokoa. Angamba rehefa miresaka pirinty amin'ny solosaina birao - na laptop mihitsy aza - tsy ho revolisiona lehibe izany, fa manokatra isan-karazany ny fahafaha-manao vaovao amin'ny alàlan'ny famelana anao hanonta avy amin'ny findainao, izany hoe ny iPhone na iPad-nao.
Raha vantany vao nalaminay tsara ny mpanonta anay manaraka ny torolàlana nomen'ny mpanamboatra azy, dia tsy ho mora kokoa ny fampiasana azy amin'ny fitaovanao iOS, toy ny ny fitaovana roa ihany no mila ampifandraisinao amin'ny tambajotra iray ihany ary araho ny dingana voalaza etsy ambany raha te hisafidy ilay rakitra hosoratana.
1 Fanontana avy amin'ny fampiharana miaraka amin'ny bokotra Share
2 Fanontana avy amin'ny paositra.
Fanontana avy amin'ny fampiharana miaraka amin'ny bokotra Share
Betsaka ny rindranasan'ny iOS no ahitana ny safidinao Share, izay azo fantarina amin'ny fisian'ny bokotra izay toa toradroa misy zana-tsipìka mivoaka avy eo afovoany:
Raha avelan'ny fampiharana, ao anatin'ny menio mizara dia ho hitantsika ny safidy Printy, ary, rehefa voafantina, dia tsy mila misafidy ilay mpanonta efa namboarina teo aloha isika, mametraka ny isan'ny kopia ary manamafy ny hetsika. Mariho fa ireo mpanonta izay manohana ny fanontana amin'ny lafiny roa Avelany ihany koa isika hisafidy raha te hampiasa io fampiasa io isika.
Ity fomba ity dia hiasa ho an'ny fampiharana novolavolain'i Apple - ankoatr'izay - ary ho an'ireo noforonin'ny antoko fahatelo.
Amin'ny rindranasa iWork ho an'ny iOS dia hafa kely ny fizotrany: ny menio fanontana tsy hita ao amin'ny Share, fa amin'ny Tools, mora fantarina satria izy io dia soloin'ny wrench.
Fanontana avy amin'ny paositra.
Satria tsy misy bokotra Share, Eto ny menio printy dia hita ao amin'ny menio soloin'ny zana-tsipìka miakatra, izay misy ihany koa ny safidy Forward and Reply.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ahoana ny fanontana amin'ny iPad anao
Slide2Kill8 Pro, tweak hanakatona fampiharana amin'ny fomba maro
Ampanjifao manokana ny WhatsApp araka ny itiavanao azy amin'ny WhatsApp + ho an'ny iOS 8